UALEX RODRIGUEZ WACHITHA IINYANGA EZIFUMANA UMSESANE WOKUZIBANDAKANYA KUKAJENNIFER LOPEZ - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UAlex Rodriguez wachitha iinyanga efumana iRing yokuzibandakanya eyiyo kuJennifer Lopez
UAlex Rodriguez wachitha iinyanga efumana iRing yokuzibandakanya eyiyo kuJennifer Lopez
Ngu: Joyce Chen 03/13/2019 kwi-4: 32 PM
Isiphi isandla onxiba ngaso iringi yakho yomtshato
UAlex Rodriguez noJennifer Lopez (ngokudibeneyo, J-Rod) baziwa njengabantu abagqibeleleyo, ngenxa yoko akufuneki kumangalise ukuba owayengumdlali weYankees wachitha iinyanga ezisixhenxe ekhangela umsesane ogqibeleleyo wokuzibandakanya nothando lwenenekazi lakhe.
Ngoku ka Iphepha lesithandathu , owayesakuba ngumdlali we-MLB wagcina ukukhangela kwakhe ezantsi, efuna ukugcina isindululo singamangalisi kuLopez. UAlex ebethengela iiringi eyiyo kwezi nyanga zisixhenxe zidlulileyo, wayesazi ukuba ufuna ukuphakamisa uJennifer, umthombo uxelele iphepha. Wayefuna ukuyifumana ngokuchanekileyo. Isindululo kudala sisiza. UAlex wayesazi ukuba inguye kwaye ebesoloko ecwangcisa ngenyameko yonke into.
URodriguez, oneminyaka engama-43, ekugqibeleni wazinza nge-16-carat, emerald esikiweyo iringi yedayimane engenasiphako eqikelelwa ukuba inexabiso eliphakathi kwe- $ 1 yezigidi ukuya kwi-5 yezigidi zeedola, iingcali zixelele Ingcaciso kule veki. (Oku kungaphezulu kwendleko zokubandakanya abadumileyo, ukuvalela ngaphakathi nje kwe- $ 1.3 yezigidi). Nangona iimbaleki zingatyhilanga umyili weeringi, kwa umthombo ofanayo uqinisekisile ukuba uyithengile phesheya.
Ngokwe-Knot's 2017 Jewelry & Engagement Study, umyinge wexesha elichithwe ukukhangela umsesane wokuzibandakanya ujikeleze iinyanga ezintathu ezinesiqingatha, oko kuthetha ukuba uRodriguez uliphindaphinde elo xesha. Uninzi lwabaphetheyo bajonge kwi-avareji yamasongo angama-26 ngaphambi kokuthatha isigqibo kwiLowo. (Kuyenzeka kakhulu ukuba uRodriguez ayilungelelanise iringi yomtshakazi wakhe, malunga neepesenti ezingama-45 zabo bonke abacebisi).
Inkwenkwezi ye-baseball yawuphakamisa lo mbuzo kuLopez, 49, ngempelaveki ngelixa babesekhefini kwisiqithi sabucala eBahamas. Isindululo esisecaleni lolwandle, kuxelwe umthombo Abantu ukuba uLopez wayemangaliswe ngokupheleleyo.
UJennifer wonwabile kwaye neentsapho zabo kunye nabahlobo, utshilo umthombo. Bambalwa kakhulu abantu ababesazi ukuba uAlex wayecwangcise ukucebisa. Kwamothusa kakhulu uJennifer. Yayiyindlela uAlex awayeyifuna ngayo.
Kwakhona kuyaphawuleka ukuba uRodriguez, ekulungiseleleni umzuzu omkhulu, waqinisekisa ukuzisa iringi yakhe yeHlabathi, kwaye wayinxiba ngelixa wayecebisa.
Kamva wathumela umyalezo wothando kunye nokubonga kubalandeli besi sibini. Akukho maninzi amagama okwabelana nawe, kuphela iimvakalelo. Umbulelo. Imincili. Kwaye nje ... uvuyo, wabhala kumabali akhe e-Instagram. Siyazi ukuba kukho umsebenzi wokwenza ukugcina usapho kunye nekamva esinokuzingca ngalo, kwaye asinakukwenza ngaphandle kwenu nonke. Siyabulela ngayo yonke imiyalezo yakho yothando kunye nokuvuyisana nawe.
izinto ezimnandi ezenziwayo emtshatweni
U-Lopez, kwelakhe icala, wabelana ngefoto yesandla sakhe eRodriguez's, i-sparkler ngaphambili kunye neziko. Wawubhala lo mfanekiso ungenamagama, enee-emojis ezisibhozo zamehlo.
Ngokobuchwephesha obufanayo kunye noFundo lokuzibandakanya, isindululo sikaRodriguez siwela ngokuhambelana nomgaqo malunga nezindululo zoluntu, ngokuchaseneyo nezindululo zabucala, apho umzuzu wenzeka kuphela phakathi kwamaqela amabini. Nangona kwakungekho namnye umntu owayehamba elunxwemeni ngaloo mini, umfoti wayekhona ukuze abambe lo mzuzu — kwaye iinkwenkwezi zombini zazonwabile kwaye zivuya.
Ixabisa malini ilayisensi yomtshato kwi-texas
Izitayile zokugcina ipali
Iivesi zebhayibhile malunga nokuthandana
kunye nesayizi yomtshato esetiweyo